 Ya mere, mgbe ha busịrị ọnụ nꞌime ekpere ha, e bikwasịrị Sọl na Banabas aka nꞌisi, zipụ ha ijere Chineke ozi. Mmụọ Nsọ duuru ha gaa obodo Selusia. Emesịa, ha sitere nꞌebe ahụ jeruo Saiprọs.
 Ebe ahụ ka ọ nọ iri ụbọchị anọ ka ekwensu nwaa ya ọnwụnwa. Iri ụbọchị anọ ndị a nile o righị nri ọ bụla. Nꞌikpeazụ, agụụ gụrụ ya. Mgbe ahụ ekwensu bịara gwa ya sị, “Ọ̀ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, gwa nkume ndị a okwu ka ha ghọọrọ gị nri.” Ma Jisọs zara ya sị, “E deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Ọ̀ bụghị nanị site nꞌiri nri ka mmadụ ga-eji dị ndụ.’ ”
 Otu ụbọchị Jisọs kọọrọ ndị na-eso ụzọ ya akụkọ iji gosi ha mkpa ọ dị ikpegide ekpere na-esepụghị aka tutuu Chineke aza ekpere ha. Ọ sịrị ha, “O nwere otu ọkaikpe bi nꞌotu obodo, nke na-adịghị atụ egwu Chineke. Ọ naghị emetụ ya nꞌobi ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ya. Nꞌobodo ahụ kwa, e nwere otu nwanyị di ya nwụrụ anwụ nke na-abịakwute ọkaikpe a oge nile na-arịọ ya ka o nyere ya aka megide onye iro ya. Ma oge nile nwanyị a na-abịakwute ọkaikpe a, ọkaikpe a ekweghị inyere ya aka. Nꞌikpeazụ, nꞌihi na nwanyị a nyegidere ọkaikpe ahụ nsogbu, ọkaikpe a kwuru sị, ‘Ọ bụ ezie na m adịghị atụ egwu Chineke, ọ nakwaghị emetụ m nꞌobi ihe ndị mmadụ na-ekwu megide m. Ma nwanyị a enyekarịala m nsogbu. Aga m enyere ya aka. Nꞌihi na ọ bụrụ na m ajụ inyere ya aka, ọ ga-aga nꞌihu na-abịakwute m, ọ gaghị enye m ohere izu ike.’ ” *** Mgbe ahụ Jisọs kwuru sị, “Leenụ ihe ajọ ọkaikpe a kwuru. Ọ bụrụ na mmadụ ọjọọ dị otu a nwere ike kpebie inyere nwanyị na-arịọsi ya arịrịọ ike aka, ọ bụ na Chineke agaghị enyekwara ndị ahụ ọ họpụtara aka, bụ ndị ahụ na-akpọku ya ehihie na abalị. Ọ̀ ga-anọ tee anya ịbịa inyere ha aka? Mba! O doro m anya na ọ ga-eme ọsịịsọ inyere ha aka. Ma ajụjụ m na-ajụ bụ nke a, mgbe m ga-alọghachi azụ, m ga-achọta mmadụ ndị kweere na m nꞌụwa?” Jisọs kọrọ akụkọ a nꞌihi ndị na-eche nꞌobi ha na ha bụ ndị dị mma si otu a na-eleda ndị ọzọ anya. Ọ gwara ha okwu sị, “Mmadụ abụọ gara nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke dị na Jerusalem ikpe ekpere. Otu onye nꞌime ha bụ onye Farisii, onye nke ọzọ bụ onye ọnaụtụ. Onye Farisii guzoro ọtọ si otu a kpee ekpere ya nye Chineke sị, ‘Chineke, biko ekelee m gị, nꞌihi na adịghị m ka ndị ọzọ. Adịghị m ka onye ọnaụtụ ahụ. Anaghị m aghọgbu mmadụ, anaghị m akwa iko, abughị m onye mmadụ na-enweghi ike ịtụkwasị obi. Ana m ebu ọnụ nꞌihi ịdị ọcha nꞌihu gị ugbo abụọ nꞌizu ụka. Ana m enye onyinye otu ụzọ nꞌime ụzọ iri nke ihe nile m nwere oge nile.’